Hultsfred | Hultsfred मा जानुहोस्
हेम » हल्ट्सफ्रेड
एन्जेला Wannbäck र Jan-Erik Sandvik संग कन्सर्ट
जादू मोजार्ट Coloratura soprano एन्जेला Wannbäck र पियानोवादक जान-एरिक Sandvik मोजार्ट को जादुई संसारमा हामीलाई लिनुहोस्। मोजार्टले आफ्नी बहिनी र आमा र कन्स्टान्जेलाई सयौं पत्र लेखे
कार्ल Petersson संग कन्सर्ट
L. वी। बीथोभेन कार्ल Petersson द्वारा काम Lund मा जन्मेको र Helsingborg मा हुर्केका थिए। चौध वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पियानो पाठ सुरु गरे र दस बर्ष पछि उनले यो बाट स्नातक गरे
Hultsfred - The واک
स्वीडिश लोकप्रिय संगीत संग सम्बन्धित आधा एक लाख भन्दा बढी वस्तुहरु। र कर्ट Olsson को मूल पोशाक - यहाँ तपाइँ रेकर्डि,, पोस्टर, भिडियो रेकर्डि,, किताबहरु, जिज्ञासाहरु पाउनुहुनेछ! स्वीडिश
Galleri Kopparslagaren मा Jarre Kronbrink संग कला प्रदर्शनी
कलमारका कलाकार जारे क्रोनब्रिंकले पानीको रंग र तेलमा आफ्नो वेदीहरु प्रदर्शन गरेका छन्। Jarre प्राग मा शिक्षित हुनुहुन्छ। Hultsfred मा कला संघ Kopparslagaren पुराना भवनहरु को संरक्षण को लागी काम गर्दछ
Kungen Restaurang केन्द्रीय Hortsfred मा टोर को योजना र Köpingsparken को बीच मा स्थित छ। राजा भोजनालय पिज्जा, बर्गर, माछा र चिप्स र सलाद प्रदान गर्दछ। अद्वितीय त्यो मान्छे हो
Hultsfred Strandcamping मा बिहान योग
ग्रीष्म तु फलाउने समय हो। किनारमा एक सानो लूजर पाउनुहोस्, खुला नरममा स्वागत छ! तपाई यस गर्मीको योग हल्स्टफ्रेड स्ट्रान्ड क्याम्पि atमा भेट्नुहुनेछ। नरम चाल, उच्च उपस्थिति र स्थिरता। फिट
पुरानो महलमा निर्देशित पैदल
Hultsfred को एक राम्रो दृश्य संग नजिकको पुरानो महल को यात्रा मा हामीलाई सामेल हुनुहोस्। हामी Hultsfreds Strandcampingen स्वागत देखि शुरू सजिलो पैदल यात्रा Lönnebergaleden मा हिंड्न। लुकआउट पोइन्ट आफैमा अवस्थित छ
Hultsfred मा डोरी पैदल
११ सुरु र समाप्ति को रूपमा Valhall साथ हिंड्न। प्रत्येक हिंडाइ करीव km किमी छ। बिंगो चिप्स SEK २० लागत। मार्च १ Val लाई Valhall मा शुरू गर्नुहोस् 11 .००-११.००, पछिल्लो १२.०० भन्दा पछि समाप्त
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet Hultsfred को लागी १० किलोमिटर पश्चिममा, Vimmerby को २ 10 मिनेट को बारे मा अवस्थित छ। क्षेत्र एक प्रकृति र माछा पालन संरक्षण क्षेत्र हो जुन लगभग includes० समावेश गर्दछ
डा। फेलगुड (युके) हुलिन्जेनमा खेल्छन्
यो आइकनिक पब रक ब्यान्ड हो। विभिन्न नक्षत्र र नाम पछि, डा। Feelgood 70 को दशकको शुरुमा गठन भयो। यो चाँडै उनीहरूको लाइभ एल्बमको साथ अंग्रेजी चार्टहरूको शीर्षमा पुग्यो
ग्यालरी Kopparslagaren मा क्रिसमस प्रदर्शनी
क्रिसमस प्रदर्शनी आर्ट एसोसियसनका सदस्यहरूसँग। बिहिबार १ 14.00.०० - १.18.00.०० शुक्रबार १ 14.00.०० - १.16.00.०० शनिबार १ 14.00.०० - १.16.00.०० आइतवार १ 14.00.०० - १.16.00.०० कोन्स्टफेरिनेंगेन कोप्पर्स्लागारेन Hultsfred work मा
Hultsfred मा पछाडिको यार्ड अल्ट्रा
Hultsfred चलिरहेको क्लब Hultsfred मा स्ट्रान्ड प्रोमेनाडेन मा पछाडिको यार्ड अल्ट्रा को योजना बनाउँदैछ। यो आयोजकको रूपमा स्वीडेन धावकहरूको साथ एकै समयमा स्वीडेनमा गरिन्छ। हामी लगभग लग ईन गरेर भाग लिन्छौं
थोरै ट्राफिक भएका साना सडकहरूमा छाना कुल्चीले आफ्नो बाटो हिँड्छ। यदि तपाइँ सम्पूर्ण दूरी साइकल गर्न रोज्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ
कलाकार लेना लोइस्के
जन्म १ 1950 .०। शिक्षित समाजशास्त्री। तन्जानिया (१ –– – -१ 1995))) मा दुई वर्ष बसेको समयमा व्यग्रतापूर्वक चित्रकला सुरू गर्नुभयो। मुख्य रूपमा एक्रिलिकमा पेन्टहरू। ल्यान्डस्केपदेखि रेनडिअरसम्म सबै
Km० किलोमिटर लामो र7891 १ मिलिमिटर चौडा, यो पश्चिममा स्माल्यान्डको जsts्गलदेखि विगतको तालहरू, साना समुदायहरू र कृषिमा द्वीपसमूहको भू-भागमा फैलिएको छ।
क्याफे सेन्ट्रम Hultsfred मा पैदल यात्री सडक संग स्थित छ। पत्ता लगाउन सजिलो छ र नजिकको राम्रो पार्कि parking सुविधाको साथ। यहाँ तपाईं एक कफी ब्रेक वा संग खरीद गर्न सक्नुहुन्छ
Hultsfred स्थानीय इतिहास पार्क
Hulingen लेक द्वारा एक सुन्दर पार्क मा Hultsfred स्थानीय इतिहास पार्क हो। ठीक अर्को ढोका फोलकेट्स पार्क, खेल सुविधा र क्याम्पिंग हो। सन्‌ १ 1924 २ H मा हुलिgen्गेन ताललाई तल झार्दा त्यहाँ थियो
होम मिठाई Hultsfred
"Home Sweet Hultsfred" प्रदर्शनी जसले संघ Rockparty र Hultsfred महोत्सव को कथा बताउँछ। कथा भित्ताहरूमा छ! Rockparty र Hultsfred महोत्सव को बारे मा प्रदर्शनी तहखाने मा Klubben कोठा मा पाउन सकिन्छ।
"हावामा संगीत छ" (Hultsfred anthem)
हामी सबैमा एक तारा देख्छौं। बसमा स्टेफनमा, होम केयर सेवामा हन्नामा र तपाईं कम्तिमा पनि होइन! हास्य समूह Infallet को संगीत व्याख्या कसरी देखाउँछ
Hultsfreds Bowlinghall मनोरञ्जन र प्रतिस्पर्धा खेल दुबै को लागी कूल courses पाठ्यक्रमहरु लाई छ। बच्चाहरूको लागि त्यहाँ फेन्स भनिन्छ। ट्र्याकको छेउमा बाँध्न बम्परहरू
Alkärret प्रकृति आरक्षित हाम्रो सबैभन्दा प्रजाति समृद्ध वन वातावरण हो, र भ्यागुता, सलामन्डर र अन्य जलीय बोटहरूमा लोकप्रिय छ। राम्रो पौष्टिक आपूर्ति को लागी धन्यवाद र
Hultsfred मा Fritidsbanken बाट उपकरण उधारो
फुर्सत बैंकमा, तपाईं १ sports दिनको लागि खेलकुद र मनोरंजन उपकरण नि: शुल्क लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईं Hultsfred मा Fritidsbanken बाट उपकरण उधार लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं फ्रिटिडस्ब्यान्कनमा orrowण लिन सक्नुहुन्छ
प्रकृति र कार्ड माछा मार्ने क्षेत्र Stora Hammarsjöområdet
Hultsfred को पश्चिम मात्र प्रकृति र छोटो मत्स्य क्षेत्र Stora Hammarsjöområdet छ। क्षेत्र सबै एrs्गलरहरूको लागि एल्डोराडो हो। त्यहाँ एक रोचक जीव र वनस्पति पनि छ।
चार व्यक्तिको लागि ठाउँ सहित राति क्याबिनहरू। १० वर्ग मीटरको सानो कुटीजहरू जुन रातभरि बस्नको लागि उपयुक्त छन्। कुटीजहरू सुविधा पछाडिको पर्खाल क्षेत्रमा अवस्थित छन्। एक